Imibuzo nezimpendulo kwi-BSF Animal Feed Maggot Ukulima • Yurie BSF
Xhumana Nathi - Thola Ukuqeqeshwa Kokulima KwamaMaggot Okukhululekile
Mayelana Nathi - Okokuqala Emhlabeni Wokuhlakulela Ama-Magorots A-Odorless
Thenga futhi uthengise i-Maggot
Ama-FAQ Wokulima Ukulima
I-Catfish Nursery FAQs
I-Assalammualaikum wr wb
Sicela usize ngombuzo futhi uphendule mayelana nomlingo we-BSF (isosha elimnyama lizindiza) ku-SHARE (okwabiwe) kumithombo yezenhlalo njengo-WA, FB, G +, Pinterest, LinkedIn Twitter njll. Sethemba ukuthi le nsizakalo yokwabelana ngolwazi ingaba imali yethu ekugcineni ekugcineni. Aaamiinn
Umhlahlandlela Wokulima Umgogodla
Umbuzo kanye Nempendulo ye-Catfish Nursery
Isixazululo Sokudla Kwezilwane Zemaggot
I-Black Soldier Fly
Iyini igama lezindiza?
isosha elimnyama lihamba (i-hermetia illucens) noma ibutho elimnyama libale.
Ingabe iphephile kubantu?
Izimpukane isosha elimnyama (I-Hermetia iyicala) ephephile kubantu ngoba abathwali izifo zofuzo ezifana nezinye izinhlobo zezimpukane.
Ukuze uthole imininingwane, sicela ubheke >> http://bit.ly/2KTuZu4
Uyini umehluko nezinye izimpukane?
Izimpukane isosha elimnyama (I-Hermetia iyicala) akulethi ukuqubuka kwezifo.
Ukudla inyama (sarcophagidae), fly fly (calliphoridae), izimpukane zendlu (musca domestica) ulethe isifo.
Ngokomzimba, ubukhulu bomzimba wabo nombala bahluke kakhulu.
Ubudala bezimpukane isosha elimnyama ngokushesha kakhulu phakathi kwezinsuku ezingu-5 - 8, kuyilapho ezinye izimpukane ziphila ngaphezu kwe-30 ngosuku.
Izimpukane isosha elimnyama angeke adle, futhi uphile ngokuphuza amazolo noma uju.
Iyakwazi ukubuyisela izimpukane ezihlaza kanye nezimpukane zendlu.
Ungalethi izifo zezifo ezifana nezinye izinhlobo zezimpukane.
Ngeke libheke ngokudla kwabantu, ngoba isosha elimnyama libale ungadli
Ukubeletha kahle ezimweni ezishisayo.
Kubonakaliswe imiphumela eningi ngaphandle kwe-BAU 10 elandelayo izinzuzo zezinkomo ze-BSF ze-maggot >> http://bit.ly/2IUBtHg
Isosha elimnyama lihamba abangadli, labo abadlayo yizingane ezibizwa ngokuthi ama-larvae noma ama-maggots noma ama-maggots.
Ukuhlukanisa kanjani owesilisa nowesifazane?
Indlela yokuhlukanisa ubulili isosha elimnyama libale ukubuka izitho zabo zobulili.
Ubulili besibhakabhaka besifazane bufana nesinaliti.
Ngesikhathi izidakamizwa zesilisa zizungeza njenge-placemat noma i-sunflower.
Bheka imininingwane lapha >> http://bit.ly/2u3GB6p
Uyazi kanjani iminyaka?
Ukuthola iminyaka ye-BSF kungabonakala emisebenzini yabo yansuku zonke.
Ama-BSF amancane avame ukuma emadwaleni e-cage noma egatsheni.
Ngenkathi abantu abadala be-BSF bebaleka futhi bahamba naye.
Thenga kusuka kubalimi.
Hlola indawo yepulazi le-maggot le-99 lase-Indonesian >> http://bit.ly/2AadIcv
Ngokuvamile, ubudala be-BSF bangaphakathi kwezinsuku eziyisishiyagalombili nesine nane.
isosha elimnyama libale kuningi ezindaweni eziningi lapho kunezihlahla ezimbali.
E-Indonesia kufanele kube khona ngoba lezizimpukane zingazalana kahle emazweni ashisayo.
Yiziphi izitho zangasese ezifana?
Ama-Genitals isosha elimnyama libale emsila, isisu somzimba wesifazane esiyindilinga eside sifana nesaliti yendilinga.
Nakuba izitho zobulili zesilisa zithande njengezingilazi zeglasi noma ama-sunflowers.
Lapho owesifazane ekhukhumeza izitho zangasese ezibonisa ukuthi uvuthiwe futhi ulungele ukushada naye.
Ukuze uthole imininingwane sicela ubheke> http://bit.ly/2u3GB6p
Izoqala nini ukhiqiza?
Ezinsukwini ezintathu noma ezine emva kokuqothula, i-BSF ikhulile bese ikhula.
Ngemuva kokulingana ngamahora amahora, i-fly fly izofa.
Nakuba owesifazane eqhuma izinsuku ezimbili kuya kwezintathu kamuva emva kokubeka amaqanda.
Iyini ukudla okuthandayo?
I-BSF ayidli, ngesikhathi sokuphila kwakhe kuphela wayiphuza amanzi amazolo noma uju.
Ingabe i-BSF, ezinye izimpukane zibalekela?
Esigodini samapulazi enamagagasi kunezimpukane eziningi isosha elimnyama izoxosha ezinye izinhlobo zezimpukane ngokwazo.
Lokhu kungenxa yeqembu lezimpukane isosha elimnyama yenza umsindo / isignali ukuthi "ibonisa" indawo yabo.
Isibonelo: uma ikati noma inja noma ingonyama ibonisa insimu yabo ngokuthi "ukuvuthwa" ensimini yabo noma emthini.
Ngokuvamile, abantu abadala abadala bayashada ngemva kweminyaka yobudala be-3 kuze kufike ku-4 ngosuku.
Izimpukane ze-BSf zibambisana emoyeni, zixosha, bese zihlanganisa izidalwa zazo zofuzo futhi ziqhubekele emaceleni amaqabunga ngezikhundla eziqhamukayo.
Okulandelayo inqubo yokuxhuma noma ukulingana lokhu babuyela komunye nomunye.
Ukuze uthole imininingwane sicela ubheke> http://bit.ly/2NpSY5L
Isikhathi esingakanani sokubamba / ukulinganisa isikhathi?
Ukuqhutshwa kwe-BSF noma umshado uhlala kumaminithi angu-5 - 10. Ngaphezu kwalokho, bahlukana.
Zibeka kanjani amaqanda?
Iqanda le-bsf i-maggot likhishwa ngamasosha omzimba.
Uma i-BSF ilahla amaqanda, izakhi zofuzo ze-BSF ziphuma zingene emithonjeni yesitoreji seqanda ezifana namaqabunga, izingcezu zekhadibhodi, izinkuni njalonjalo.
Mangaki ama-BSF abeka amaqanda?
I-BSF iveza kanye phakathi kwe-500 - ama-900 amaqanda, noma okuthiwa i-cluster yeqanda le-BSF
Uyini ukuma kweqanda?
Amaqanda we-BS afakwe njengombala omhlophe ovundlile, kancane kancane ashintsha umbala ukuze uphuphuke.
Hlola indawo ye-99 Kweminye Imifino Yamaggot!
I-Maggot baby - izingane?
Uma ukuxosha ingane i-larva iyowela ngqo emgqonyeni wokudla ngaphansi.
Amantombazane amantombazane ahlala khona futhi akhule amasonto amathathu kuya amane.
Kungani izibungu noma izimpethu zinkulu kakhulu?
I-BSf izibungu ziyaziwa ukuthi zinzima ngoba zingaphila ezindaweni ezinomuthi usawoti ophezulu, utshwala, ama-acids (ama-acid) dan ammonia.
Emakhazeni asebandayo kanye nokuntuleka kokudla ngokwemvelo izimpungushe ze-BSF zizoziqhenya (zingasebenzi).
Futhi ubuyele emsebenzini lapho izinga lokushisa libuyela ejwayelekile noma lapho imithombo yokudla iyatholakala futhi.
I-Larva - i-maggot?
Izimpungushe ze-BSf noma ama-magog aphila ngokuhlangabezana nezigaba eziningana.
Kuboniswe ngenye indlela yombala wabo wesikhumba.
Umhlophe ophuzi uphendukela ekukhanyeni okubomvu.
Kulesi sigaba izibungu zingakhula ubude ukuze zifinyelele ku-1,5 - 2cm.
I-Maggot iqala nini ukuthola?
I-Larva iqala ngokukhiqiza ngokusakaza, ezimweni zokungcola nokudla okuningi.
Ngolunye usuku izimpungushe zingakwazi ukuchitha udoti ngokuphindwe kabili isisindo somzimba.
Uneminyaka engakanani i-Maggot?
Ngokuvamile, iminyaka yama-magot iphakathi kwamasonto amathathu namane.
Yini i-maggot isho ukuthatha isisusa?
Iqembu kusho ukuthi kusho badle izinto eziphilayo ezifana nezitshalo, imfucuza yemvelo, umquba wezilwane kanye nokushiswa kwefektri.
I-Maggot inezinzuzo eziningi?
I-BSF Maggots inezinzuzo eziningi, ngoba zicebile izakhi, amafutha, i-calcium, ama-amino acids, futhi iphrotheni ephezulu.
Ngakho ukuthi isetshenziswe kahle njengokudla kwezilwane kwezinhlanzi, izinkukhu, izilwane ezihuquzelayo, izingulube, izigqoko zokugcoba kanye nezomnivoti.
Izivunguvungu zivame ukusetshenzwa zibe:
I-Maggot nayo isetshenziselwa kabanzi emithini yezokwelapha nge-term maggot therapy.
Noma ukuze amaphoyisa asetshenziswe njengethuluzi lokukhomba iminyaka yobudumbu.
Kwamanye amazwe sekuye kwaba ukudla okuthandayo futhi kuyatholakala ezindaweni zokudla. noma wenza inhlama.
Kungani i-BSF yeMaggot?
Kubaluleke kakhulu kusukela ekuqaleni ukuthi uqonde kahle ukuthi ezifuyweni ziyizimpukane zohlobo isosha elimnyama libale noma hermitia illucens.
Musa izilwane ezifuywayo ezinemifino ephethe izifo zesifo.
I-Maggot BSF Vs Maggot?
Indlela yokuhlukanisa ngayo kulula kakhulu, i-BSF ibumnyama kanti izinhlanzi eziluhlaza ziluhlaza.
I-BSF isinde futhi ilula. Ngenkathi izimpukane eziluhlaza zifushane futhi zinamafutha.
Prepupa yisigaba sezibungu ezindala zamasonto amathathu kuya kwamane ubudala.
I-Larvae esifike kuleli sigaba ngokuvamile ibonakala kalula embala ophendukile omnyama.
Ingabe lokho kuyi-pupa?
Isigaba se-pupa noma se-cocoon lapho izibungu zamagagane zingenakulala futhi ziqamba amanga njengezifile.
Kulesi sigaba inqubo yokwakheka komzimba kwezimpukane, emehlweni, izinyawo, isisu, ikhanda, njll.
I-pupa noma i-cocoon cishe isonto elilodwa ngaphambi kokuba lishintshe noma lishaye indiza isosha elimnyama.
Yisiphi isitsha esiphezulu se-maggot esenziwe?
Isiqukathi sesiphathi sesigcawu esenziwe nge-samente nesitini.
Isiqukathi sesiphathi sesigcaqo esenziwe ngezitini.
Isiqukathi esiphezulu esivela emthini we-culvert
Isiqukathi sesiphathi sesigcawu se-tarpaulin noma impahla ye-banner
Ibhokisi lebhokisi lezinkuni usayizi webhokisi leqanda.
Isitsha sesitoreji esinamapulangwe amaningi.
Izimbiza zepulasitiki noma iziqu zobukhulu bonke.
Isitsha sesitsha sebhokisi lesithelo.
Uma isisekelo samanzi echibini senza i-maggot ingabaleki?
Izimbiza zamachibi ngamasimenti amasheya zingcono kunamachibi angaphansi komhlaba, ngoba ukusakazwa kwamanzi kungaba ngcono kakhulu.
Uma echibini lisesimweni sesimiso, kufanele linikezwe umgodi lapho amanzi egezwa khona echibini.
Kuthiwani ngokusebenzisa i-tubs plastic noma i-tarpaulin?
Izingxenye zebhayisikili epulasitiki noma i-tarpaulin kufanele zinikezwe umgodi wokukhipha amanzi angaphezu kwamanzi futhi kulindeleke ukuthi kwenzeke amanzi aphelile.
Ubukhulu bomgodi kanye nenani kufanele kuhlelwe futhi kuqinisekiswe ukuthi ukugeleza kwamanzi kubushelelekile ngokwanele.
Kwenzekani uma abezindaba bemanzi kakhulu?
Lesi simo sibonisa abezindaba abangenempilo ekuthuthukiseni umgogodla futhi babangele iphunga elimnandi.
I-maggot ayinempilo ngoba uhlelo lokuphefumula luphazamiseka kakhulu.
Ezinye izimpethu zizovela phezulu bese zibalekela.
Yiziphi izici zemidiya yempilo enempilo?
Izici zemidiya yempilo enempilo zimi kanje:
Imithombo yezindaba ivulekile futhi ayiqinisa futhi ayikhukhumezi.
Kukhona njalo abezindaba ezintsha.
Imidiya yemaggot iyisihluthulelo sokulima okuphumelelayo, kusho ukuthini lokhu?
Imidiya yemaggot iyindawo lapho iMaggot ihlala khona kanye nokudla kwamaggot ngokwayo.
Uma imvelo noma imidiya yemaggot iphilile, i-maggot izoba ngokuzenzekelayo ibe nempilo.
Ngakolunye uhlangothi, uma imidiya ye-maggot ingenempilo, izothinta impilo nokukhula kwamagogane.
Kufanele unikeze nini imidiya entsha?
Ngaso sonke isikhathi lapho kutholakala khona ama-maggot feeds, imidiya ihlelwe amasonto amabili kuya kwamabili ngokulinganayo anikelwe ebusweni bezindaba.
Ungalondoloza kanjani imidiya yemaggot?
Ama-maggot media kumele agcinwe ngokungeza abezindaba ezintsha njalo.
Imidiya igcinwa ngumanzi ngokushelela njalo.
Yini engasetshenziswa njengemidiya yemaggot?
Uhlobo olunomsola welayisi.
I-humus yemvelo noma umquba.
Umquba umphumela wokuvutshelwa kwamagciwane.
Duck / izigwaca / inkomo / imbuzi / unogwaja / inkukhu / umquba wodada.
I-Cocopit noma i-coconut fiber.
Igatsha noma ibanga.
Umquba wamafutha omuthi
Ikhekhe lamafutha e-Palm
Bheka indlela lapha >> http://bit.ly/2CuSxTY
Ingabe i-sawdust ingasetshenziswa njengemidiya yemaggot?
Ungakwazi, uma abezindaba bekhona kakhulu abaseduze nathi.
Ingabe imidiya yemaggot ingaxubana namanye abezindaba?
Ungakwazi, iphuzu ukusebenzisa izinto ezitholakala kumidiya ezindaweni zethu ezifanele.
Ingabe imidiya yemaggot idinga ukuvutshelwa?
Media - Kulture
Empeleni abezindaba abangasetshenziswa yizindaba eziphilayo, njenge:
Udoti wemakethe >> http://bit.ly/2EF2qAd
Igatsha noma umugqa >> http://bit.ly/2IVj3G3
Udoti wamafutha wepilisi >> http://bit.ly/2Nsy9qe
Ikhekhe lamafutha e-Palm.
Umquba wezinkukhu. >> http://bit.ly/2EEktY9
Umquba wembuzi. >> http://bit.ly/2EA7lCl
Umquba wenkomo. >> http://bit.ly/2RcfxPT
Umquba wamanzi. >> http://bit.ly/2pRXkI6
Uyazihlukanisa kanjani abahlukumezi bezindaba?
I-Kasgot noma i-maggot iphawula noma imilasi yamagog kumele ixutshwe endaweni eyodwa.
Ukuhlukanisa umcibisholo osuka kumaphephandaba, kucacile ukuthi izici ze-cassava zimnyama, ukuthungwa kufana nesitshalo se-sand.
Ingabe umquba wezinkomo unganikwa ngqo kumagog?
Bheka indlela lapha >> http://bit.ly/2Lpt0OR
Ingabe imvukuzane entsha yenkomo ingasetshenziswa njengesondlo se-maggot?
Bheka indlela lapha >> http://bit.ly/2RcfxPT
Kuthiwani futhi ngubani oyilwane?
Izitha zokulimaza noma izitha zokulima ziyi:
Yiziphi izidingo zendlu / i-BSF enhle?
Ungabona izidingo zokuhlala zeMaggot ku >> http://bit.ly/2tWfj2o
Amanye amathuluzi nemishini kufanele inikezwe njengale:
Indawo yokukhulisa umgogodla
Indawo yokuqhaqha amaqanda
Indlela Yokwenza I-Maggot Pasta
Indlela Yokwenza I-Maggot Flour
Indlela yokwenza ama-pellets aseMaggot
Ingabe ukutshalwa kwemagog kungabe sekushisa okushisayo?
Ukulima imaggotha ​​akuthinteki ngokuqondile ukushisa kwemvelo, njengokushisa okushisa noma okubandayo, izindawo ezimanzi noma ezomile njll.
Ngoba ukuthuthukiswa komgogodla kunomthelela oqondile yisimo semidiya yemaggot ngokwayo. Futhi imidiya yokuhlala emagogini ingahle ibekwe ngokuvumelana nezidingo zemaggot.
Ingabe ukutshalwa kweMaggot kungavuleka?
Ukulima umgogodla kungenziwa ngaphandle noma ngaphandle noma egumbini elivaliwe.
Ukulima umgogodla kungenziwa futhi endaweni enomswakama ene-air umoya omncane kanye nelanga.
Isinyathelo By Step Ukuhlakulela Magogots
Izincomo zokutadisha umlingo wokulima kufanele zenziwe ngezigaba, isinyathelo ngesinyathelo ukuze imiphumela ingakhuliswa.
Ngaphezu kwalokho, imiphumela yomkhuba esiteji ngasinye kufanele ihlaziywe ngendlela efanele noma idinga ukulungiswa.
Isinyathelo esilandelayo sokulima umlenze, kufaka phakathi umlingo wokumaketha
Amathiphu wabaqalayo nabadala ukuze uthole imiphumela emihle kakhulu
Umhlahlandlela Wokuthengisa Wamaggot
Ukumaketha kweMaggot kulula kakhulu, enye indlela ukuzithengisela yona njengethuluzi lokunciphisa izindleko zokuthenga amapelisi.
Uma ungenayo imfuyo yakho, ungasondela futhi usondele ezindaweni ezibalulwe ngezansi:
Umphakathi wamapulazi ahlanzekile kanye nendawo.
Umphakathi wokudoba inhlanzi yamanzi ahlanzekile kanye nesikhungo.
Umphakathi kanye nesikhungo se-eel fish farms.
Umphakathi wezinyoni we-Ornamental.
Izithako ezithandekayo nezomuthi.
Izithako eziyisisekelo ngezidingo zokwelapha.
Ukuphathwa kwemfucuza edidiyelwe ngamabhange amfucuza.
Iqala ibhizinisi lokudla kwezilwane.
Ukwandisa ibhizinisi lezinhlanzi nezinkukhu.
Thengisa ku-Yurie BSF.
Hlola ukuthi ungathengisa kanjani ku-Yurie BSF izibonelelo kulabo abaswele
Ukunikeza >> http://bit.ly/2V6gQyX
Ukumaketha kweMaggot >> http://bit.ly/2RcS7tQ
Ukuthengiswa kweMaggot >> http://bit.ly/2ELaFLS
Ukuqeqesha okuqondile ekuHlangeni kwezilwane
Uma unquma ukuhlanganyela ekuqeqeshweni kokulima umlingo, kubalulekile hhayi kuphela ukuthi ukwazi ukukhiqiza umlingo.
Kodwa khetha indawo yokuqeqesha eye yafakazela ukuthi iphumelele, kufaka phakathi ukusabalalisa ukukhiqizwa.
Okulandelayo uhlelo lokuqeqesha nge-Yurie BSF:
I-1. UKUQHUBA KWAMAGGOT BSF
Uzokwazi ukukhiqiza imfino ye-BSF enemvelo ngaphandle kwe-BAU, enezimpande eziningi ezinyangeni ze-1,5.
Chofoza ku-EVIDENCE> http://bit.ly/2Lpt0OR
I-2. ISICELO SAMAGGOT BSF
Ungaxuba umgogodla we-BSF enefomula ekhethekile ukuze imfuyo ikhuphuke ngokushesha.
Chofoza ku-EVIDENCE> http://bit.ly/2SXcBE8
I-3. I-MAGGOT BSF MARKETING
SELL YURIE BSF !!! Awudingi ukudideka mayelana nokumaketha kwamagogane, ngoba u-Yurie BSF uyayithenga
Chofoza ku-EVIDENCE> http://bit.ly/2Bu7zHQ
I-4. UKUTHUTHUKISA IBHIZINISI
U-Yurie BSF unikeze u-Rp100.000.000 usizo olungcono lomngane ongawasebenzisa ukwandisa umthamo wokukhiqiza ibhizinisi lakho lokulima Maggot.
Ukubuyiselwa kwemali E-PAID NAMAGGOT NGAPHANDLE NEZIPHUMA - AKUBA RIBA !!!
Chofoza ku-EVIDENCE> http://bit.ly/2oR86hp
I-5. I-AMBASSADOR YURIE BSFANDA AKAYABONA.
I-AMBASSADOR YURIE BSF ilungele ukuba khona epulazini lakho
U-AMBASSADOR Yurie BSF ukhona emadolobheni angaphezulu kwe-100 ukunikeza isiqondiso esisebenzayo ngqo emapulazini abo.
INCWADI NJE! 0812-2105-2808
I-6. I-YURIE BSF UNIVERSITY
Ku-YURIE BSF UNIVERSITY uzonikezwa ukuqeqeshwa okukhethekile kwezinga eliphezulu. Ukuqinisekisa ukulima kwe-BSF yanamuhla ngaphandle kwephunga kuhambisana ne-SOP ye-BSS yanamuhla ngaphandle kokunuka (inqubo yokusebenza evamile).
Chofoza ku-EVIDENCE> http://bit.ly/2A4kMY1
I-7. I-COOPERATIVE MAGGOT INDONESIA
Njengomngane ka-Yurie BSF, uvele ube yilungu le-KOPERASI MAGGOT INDONESIA.
I-Indonesian Cooperative Maggot ingokwesizwe sase-Indonesia, njengeforamu elisemthethweni lokuthenga nokuthengisa ngamagagane nokunye ukuthuthukiswa kwebhizinisi.
Uzothola izinzuzo zokwabelana ngemali esele esetshenziselwe ibhizinisi lokusebenzisana le-maggot yase-Indonesia.
Chofoza ku-EVIDENCE> http://bit.ly/2Lm1rGt
Uzoba yingxenye yokuthuthukiswa kwebhizinisi le-agro-industries ukuhlangabezana nezidingo zamakethe zasekhaya nasemhlabeni jikelele.
I-9. I-BONO PRO
Lolu hlelo lwe-CSR luhloselwe labo abangakwazi ukuthenga ukuthenga i-BSF iphakheji yanamuhla ngaphandle kokuhogela.
I-10. THUMA NOKUZEZA
Ukuqala imisebenzi yethu yansuku zonke ngomthandazo kuyadingeka ukuba siqhubekele phambili nosuku noNkulunkulu.
Ngakho le-Yurie BSF ayikho uhlelo lwe-10 yi-MAIN no-NUMBER eyodwa yazo zonke izinhlelo zokusebenza ze-9 ezithunyelwe.
I-99 Indawo ye-Ranch
Hlola i-99 Indawo ye-Maggot Ranch
Ingabe kukhona abalimi bomlingo edolobheni lakho?
Hlola indawo ye-99 yamapulazi aseMindonesian
Amathiphu & Amasu
Nakuba i-BSF iphephile kubantu, kodwa ngomkhuba sizohlangana nodoti, umquba wemfuyo kanye nenkunkuma njengama-sludge yamafutha esundu noma i-tofu waste nokunye.
Ngakho-ke kubalulekile ngathi ukusebenzisa amaglavu. Lokhu ngokuqinisekile kufanele sigweme izandla zethu zingcolile ngamagciwane kanye nezifo.
Kungani i-Maggot idinga ukuthengiswa kwempahla?
Umgogodla uqukethe izakhi zamaprotheni aphezulu kakhulu ngakho-ke kuhle kakhulu ukusetshenziselwa ukudla kwezilwane.
Ukudla kwamagogane kusemncane kakhulu, njengokudaka imakethe, izitshalo zokudla, umquba, imfucuza yefektri etholakala kalula futhi ekhululekile.
Ukulima imaggotha ​​kulula futhi kuyabizi.
Ukubeletha kufana nokushesha futhi kwemvelo ngaphandle kokuvuthwa, ngaphandle kwezidakamizwa, ngaphandle kwemishini.
Ingozi yezifo emalini yokulima iminyene kakhulu.
Amathenda ezimakethe ezimakethe ngendlela ye-maggot pasta, i-maggot i-maggot, i-maggot pellets ivulekile kakhulu.
Izinzuzo zezimpukane ezihlaza?
Asikho isidalwa esisodwa sikaNkulunkulu esingenayo izinzuzo, kuhlanganise nezimpukane eziluhlaza.
Sicela ubheke ividiyo elandelayo ukuthola izinzuzo ezingathathwa ezimpukeni eziluhlaza.
Chofoza >> http://bit.ly/2rQPGio
Xhumana no-Yurie BSF
I-Tel / WA: 0812-2105-2808
I-Yurie BSF - Ukulima Kokuqala KwamaMaggot Okungavamile
Thola ukuqeqeshwa kokulimala kwamaMaggot
Uhlelo lukazakwabo we-
© 2000-2018 FreshBooks | Shayela mahhala: 0812 - 2105 - 2808
I-Google + https: //plus.google.com/+YurieBSF